Tababar ku saabsan diiwaangelinta cod-bixiyaha oo GMDQ loogu qabtay Muqdisho – GMDQ
Tababar ku saabsan diiwaangelinta cod-bixiyaha oo GMDQ loogu qabtay Muqdisho
14-16ka May, 2018 shaqaalaha iyo xubnaha GMDQ ayaa tababar 3 cisho socday loogu qabtay magaalada Muqdisho. Tababarka ayaa waxaa soo qaban qaabiyay hay’adaha ka shaqeeya doorashooyinka ee kala ah IESG iyo CREATIVE. Ujeedka tababarka ayaa ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa xirfadda iyo aqoonta la xiriirta diiwaan galinta codbixiyaha ee xubnaha iyo hawlwadeenada GMDQ.
Tababarka ayaa waxuu qayb ka ahaa hawlaha GMDQ ugu diyaar garoobayan diiwaan gelinta cod-bixiyayaasha Soomaaliyeed mustaqbalka dhow. Sidoo kale tababarka waxaa ka soo qayb-galay oo ka faaiideystay xubno ka socday wazaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya qeybtooda ka shaqeysa arrimaha doorashooyinka.
Gabagabadii siminaarka waxaa shaqaalaha Guddiga iyo shaqaalaha wasaarada Arrimaha Guddaha qeybta diyaarinta sharciga doorashada lagu gudoonsiiyey shahaado cadeynaayo barashada arrimaha ku saabsan diiwaangelinta cod-bixiyaha.
Waxaana si wadajir ah shahaadaha u gudoonsiiyey xubnaha ka faaiideestey siminaarka, Gudoomiye ku xigeynka Guddiga Madaxbannaan Doorashooyinka Qaranka Sayid Cali Sheekh Maxamed iyo Gudoomiyihii hore ee guddiga doorashooyinka Kenya (IEBC) mudane Axmed Isaak Xasan oo ka mid ahaa dadka tababrka bixinayay.
Tababarkan waxaa wax badan ka badali doono howlaha laga sugaayo Guddiga ee ah in dalka ay gaarsiiyaan nidaamka doorasho cod iyo qof 2020.
Xirfadaha iyo aqoonta laga helay tababarkaan sedaxda cisho ah ayaa la rajeynayaa in ay GMDQ ay ka caawiyaan in ay diiwaan geliyaan dhammaan cod bixiyayaasha Soomaaliyeed.
Waxaa la faafiyey June 6, 2018 August 16, 2018